मेरा लागि शेर बहादुर भन्दा निर्वाचित गराउने जनता सर्वपरीः रामहरि खतिवडा (भिडियो कुराकानी) | KTM Khabar
२०७३ मंसिर २४ गते १८:४६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । आफ्नो तलब सुबिधा आफ्नो क्षेत्रका जनताको सेवामा खर्चने निर्णय पश्चात नेपाली राजनितिक बृतमा चर्चाको बिषय बनेका नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता तथा ओखलढुङ्गा क्षेत्र नम्वर ४ का निर्वाचित सांसद रामहरि खतिवडासंग केटिएम खवर डटकमका लागि रवि भट्टराईले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत सो कुराकानीको संपादित अंशः
तपाईलाई नेपाली राजनितीक वृत्तमा मन पराईएको अनुहार मानिन्छ नि ?
तपाईहरुले म प्रति गरेको शुभेक्षा र जसले मलाई मनपराउनु भएको छ उहाँहरुलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । वर्तमान राजनिक अवस्थाको वारेमा कोट्याउन खोजेको अनुभुती मलाई भएको छ । मुलुक अहिले अप्ठ्यारो अबस्थामा छ । खुट्टामा दुख्यो भने त्यसको असर दिमागमा कहि बतै पर्छ र सानो ठेस लाग्यो भने त्यसको असर सम्पुर्ण जिउमा पर्छ । हो, अहिले राजनितीक जटिलता जस्तो अनुभुति हुन्छ ।
अहिले काङ्ग्रेस उसको अडान नछोड्ने, एमाले आफ्ना अडान नछोड्ने, माओवादी आफ्नो अडान नछाड्ने, मधेसी पनि आफ्नु अडान नछाड्ने यसरी समस्या समाधान हुन्छ ?
यही नै समस्याको विषय छ र दुर्भाग्य पुर्ण छ । मैले भन्दै आएको छु, मुलुकको हितको लागि जाति र पार्टी भन्दा माथि उठ्नु पर्छ, लिङ्ग र धर्म भन्दा माथि उठ्नु पर्दछ । हामीले देखेका छौ संसदमा महिला आउछन्, महिलाका मात्र कुरा उठाउँछन्, मधेसी आउछन् मधेसीको मात्र कुरा गर्दछन्, मधेसमा पनि मुस्लिम आउछन् मुस्लिमका मात्र कुरा उठाउछन्, पहाडीया आउछन पहाडका मात्र कुरा उठाउछन् तर हाम्रो नेपाल धोती लाउनेको पनि हो, टोपी लगाउनेको पनि हो र बख्खु लाउनेको पनि हो । त्यसैले हामी सबैको नेपाल बनाउन जाती र पार्टी भन्दा माथि उठ्नु पर्छ क्षेत्र र संप्रदाय भन्दा माथि उठ्नु पर्छ । म र मेरो भन्दा हाम्रो र राम्रो प्रवृतिको विकास गर्नु पर्छ । त्यो विकास नगर्दाको परिणाम आज देश अप्ठ्यारो अबस्थामा पुगेको छ । मधेसका साथीहरुलाई मधेसको भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थसंग जोडेर हेरिरहेका छन् । मधेसका केही नेताहरु मधेसमा जान्छन् भोटको कुरा गर्दछन् केन्द्रमा आउछन् नोटको कुरा गर्दछन् । जनताको चासो ऊहाँहरुलाई छैन ।
मधेसका जनताले तिरस्कार गरेका नेताको स्वर हावी भएको हो ?
तपाईले भनेकै कुरा हो, हिजो अस्ती बाहिरबाट आएर नागरिकता लिने, नागरिकता लिएको दश वर्ष पुग्न पाएको छैन हाम धर्ति पुत्र छे भनेर भाषण गर्ने अनी रियल नेपाली जनता जो यही धर्तिमा जन्मेका चाहि कुन पुत्र हुने, बाहिरबाट आएका चाहीँ धर्ती पुत्र हुने अनि यहीँ पुस्तौपुस्ता बसेका चाहीँ कुन पुत्र हुने । मुलुकको विकास यो प्रबृतीबाट सम्भब छैन ।
यहाँ हारेकाले जितेकालाई ठोक राज गर भन्ने प्रवृतिको विकास भयो । मुलुक निर्माण भनेको तपाईको विश्वास मैले जित्न सक्नु पर्छ मेरो विश्वास अरुले जित्न सक्नु पर्यो । तपाईले मलाई माया विश्वास गर्नु भयो भने मैले तपाईलाई विश्वास गर्छु । त्यसैले निष्ठा र विश्वासको राजनितीको जरुरी छ । हामीले देख्न चाहेको भनेको हिमालको नेपाल हो, पहाडको नेपाल हो र तराईको नेपाल हो, हामी नेपालीले मधेसवादी, पहाडीया भन्दैनौ हामीले के छ दाजु ?, के छ भाउजु ?, के छ दिदी ?, के छ अमा ? जस्ता शब्दहरु प्रयोग गर्दछौ । यो भनेको एउटा नेपालीत्वको मिलन विन्दु हो । त्यसैले यसैलाई कन्टिन्यु गर्नु पर्छ भन्ने मेरो भनाई हो । हामिलाई तराईको दाईले गाउमा गएर पढाएर यहाँ ल्यायो, हाम्रा गाउका आमा बुवाहरु तराईमा गएर ब्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई सम्मान गर्नु पर्छ । यसैको मिलन नै नेपाल हो । त्यसैले एउट क्षेत्र, वर्ग र सम्प्रदायको राजनिती काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी तथा मधेसवादी पार्टीहरुले गर्न हुदैन यो नेपाल र नेपालीको बिरुद्धमा हुन्छ ।
जनता सन्तुष्ट छैनन् हरेक पार्टीका नेतृत्वसंग जनताको आक्रोस छ, अवको निकास के देख्नु हुन्छ ?
मेरो सबै पार्टीका नेतृत्व गर्ने आदणिय नेताहरुलाई अनुरोध गर्न चाहान्छु, तपाईहरु मुलुकका लागि राजनिती गर्दिनुहोस, म पार्टी सभापती छु भने यो पटक मन्त्री प्रधानमन्त्री भईन भने अर्को पटक हुन्छु भन्ने सोचिरहनु होस न, मुलुक नै सकियो भने त तपाईको अस्तित्व के रहन्छ र ?, मुलुक रहे देखि ती पदहरु सधै हामी पाउछौ । त्यसैले पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि रहेर सोचिदिनुहोस कि आउने पुस्ताले तपाईको हाम्रो पुस्ताले तपाईका फोटो हेरेर धिक्कार मेरा नेता भन्नु नपरोस । त्यसैले मैले भन्न खोजेको निष्ठाको राजनिती गर्र्नुहोस, पद आइरहन्छन, त्यसको लोभमा हुने नहुने काम गर्न थालियो भने आउने पुस्ताले तपाईलाई धिक्कार्छन । अनी अर्को कुरा युवासाथीहरुलाई पनि ठाऊँ दिनु पर्यो । नेपालमा यस्तो प्रवृती छ, कुनै पद भएन भने आर्यघाटमा गएर जल्दिन कि भन्ने मानसिकता र प्रवृति हट्नु पर्यो र अहिले चाँहि जनताका लागि सोचौँ ।
त्यसो भए तपाई चाहीँ पद भन्दा पनि जनताको सेवा सर्वोपरी ठान्नु हुन्छ हो ?
वास्तबमा नै म निर्वाचित प्रतिनिधि हुँ र मेरा लागी शेर वहादुर, पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली भन्दा मलाई निर्वाचित गराउने जनता सर्वोपरी हुन् र उनीहरुको आवाजको प्रतिनिधित्व मैले गर्ने हो । त्यती मात्र हैन ती क्षेत्रका जनताको आवाज भन्दा ठुलो आवाज राष्ट्रको उठ्यो भने मैले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्दछ । त्यसैले फेरी पनि भने तराईका नेताहरुलाई तराईमा जादाँ ऊठो जुठो भन्ने र केन्द्रमा आउदा उठो लुटो भन्ने प्रवृतीले देश बन्दैन । त्यसैले मेरो भन्दा हाम्रो भनौ, यो मेरो हो यो छुट्याईदे भन्ने प्रवृती गलत हो । नेताहरु नै सबैथोक हुन भन्ने पनि गलत हो र म तपाईको मिडिया मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै दलका मुख्य नेताहरुलाई मुलुक तपाईको मात्र होईन समपुर्ण नेपाली हरुको यो मुलुक बन्नमा योगदान छ, तसर्थ रडाको मच्चाएर खैलाबैला गर्ने काम गर्दै नगर्नुहोस, यो कसैको हितमा छैन । यो देश हिमालीको पनि हो पाहाडीको पनि हो र तराई बासीको पनि हो ।
तपाई मिठो कुरा गर्नु हुन्छ तर एमाले सडकमा छ, मधेसवादी दलहरु सन्तुष्ट छैनन् समाधान त देखिदैन नी ?
हिजो संविधान जारी गर्दै गर्दा मधेसी दलका नेताहरु संविधान मान्दिन भनेर नाकामा बसेर पारी बसेर वारी ढुङ्गा हान्ने काम गर्नु भयो । डेढ बर्षसम्म त हामी नाका बन्दिमा पर्यो, कती दुख सहियो तर त्यो नाममा केही मधेसवादी नेताहरु जनता हैन नेताहरु मोटाउने प्रवृतिको विकास भयो तर अहिले परिस्थिती चेन्ज भएको छ । अहिले एमलेलाई बाहिर राखेर पनि समाधान हुनेवाला छैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको सबैले मिलेर बनाएको संंविधान सबैले मिलेर कार्यन्वयन गर्नु जरुरी छ । सबै नमिलीकन मुलुक निर्माण हुन सक्दैन, त्यसैले सल्लाह गरेर छलफल गरेर अगाडी बढ्न जरुरी छ । टकरावको राजनिती गर्न हुदैन, सहमती, सहकार्यबाट नै अगाडी बढ्नु पर्दछ ।
तपाई लोकप्रिय हुनको लागि आफ्नो तलव जनताको नाममा दिनु भएको हो ?
त्यस्तो होईने, म पपुलिष्ट हुनलाई त्यस्तो गरेको छैन, मेरो आफ्नै व्याबसायहरु छन्, यस्तै पार्टी प्यालेस र रेस्टुरेन्टमा सेयर हालेको छु र त्यसैवाट म खर्च चलाउने गर्दछु । मैले मलाई जिताउने मेरा जनताको सेवाको लागि मेरो तलव खर्चेने निर्णय गरेको छु र यसको हिसाब पनि मैले पारदर्शी रुपमा देखाएको छु ।
समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ।
यहाहरुलाई पनि धन्यवाद ।
रामहरि खतिवडासंगको भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तल क्लिक गर्नुहोसः